Yakanyanya Kudonha Sheet Mugadziri uye Fekitori | Aosheng
Donhwe jira rinonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuvaka yekupenda kana yekuchengetedza, kunyanya yakanakira kuvhara fanicha. Iyo ndeye multifunctional epurasitiki inodzivirira firimu.
✦ Chinyorwa: Pe epurasitiki.
✦ Ruvara: yakajeka kana vamwe.
Saizi: 4mx5m, 4mx12.5m
✦ Inokodzera kushandiswa kwemukati.
Donhwe jira rinonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuvaka yekupenda kana yekuchengetedza, kunyanya yakanakira kuvhara fanicha. Iyo ndeyeye multifunctional epurasitiki inodzivirira firimu. Jira rekudonha rinogona kuve rakanakira kushandiswa kwemukati. Izvo zvigadzirwa zvedu zvechinyakare uye zvakakurumbira. Izvo zvinhu ndeye HDPE masking firimu. Iyo masking firimu inogona kuve yakawanda-yakapetwa kusvika ruoko saizi kuitira kuti ive nyore kushandisa. Ini
t yaigona kupinza pamusoro uye kudzivirira kubva pamusoro pechipirindkusvibiswa. Disposable chigadzirwa, yakachena uye nyore. Mutengi wevatengi aigona kudhindwa pane kurongedza bhegi. Iyo masking firimu yaizovandudza yako yekupenda basa kugona, chengetedza vashandi / nguva nemari.
Donhwe jira rinonyanya kushandiswa kuchengetedza iyo isina kupenda chikamu panguva yekuvaka yekupenda kana yekuchengetedza, kunyanya yakanakira kuvhara fanicha. Iyo ndeye multifunctional epurasitiki inodzivirira firimu. Iyo masking firimu inogona kuve yakawanda-yakapetwa kusvika ruoko saizi kuitira kuti ive nyore kushandisa. Inogona kupinza pamusoro uye kudzivirira kubva pamusoro pechipiri kusvibiswa. Disposable chigadzirwa, yakachena uye nyore.
- HDPE zvinhu.
Transparent kana vamwe
1pcs / bhegi, 100bags / bhokisi
1pcs / bhegi, 50bags / bhokisi
1pcs / bhegi, ipapo mubhokisi
A: zvidimbu 30000 pahukuru.
Q: Unogona kupa mharidzo?
A: ehe, sampuro inogona kuve yemahara, asi mutengi anofanirwa kubhadhara mutengo wekutaura.
Mubvunzo: Zvakadii nezvekubhadhara kwako?
A: Tinogona kugamuchira T / T (30% kubhadhara mari uye 70% chiyero), uye LC pakuona.
Pashure: Paint Masking Set
Zvadaro: Yakatemerwa Masking Firimu
(Yakajairwa masking tepi + HDPE) Yakagadzirwa Masking Firimu
HDPE ZVAKAWANDA KUVAKA FILM